म धर्मका विरुद्धमा कहिल्यै छैन तर मबाट धर्मको अभ्यास पनि कहिल्यै हुँदैन « Bikas Times
मलाई देवताले केहि अनुकम्पा गर्लान भन्ने त्यस्तो केहि लाग्दैन । म देख्छु, कति साना बच्चाहरु मरिरहेका छन्, आमाहरुले कति कल्पेर देवताहरुको प्रार्थना गरे होलान्, कतिका दुलाहा मरिरहेका होलान्, घर बर्बात कतिको भयो होला । ती सवै कुराहरु देख्दा भने मलाई ईश्वरको विषेश अनुकम्पा हुन्छ भन्ने पत्यार लाग्दैन् ।
अस्ति चन्द्रशेखर यहाँ आएका थिए । उनले पशुपतिनाथ जान्छु भने र मेरा डाक्टरलाई लिएर गए । त्यहाँबाट दुई बोहता प्रसाद लिएर आए, एउटा सुशीललाई दिए र अर्को अरु कसैलाई दिए । उनले ल्याएर मलाई टिका लगाईदिए र भने, उनले प्रसाद लिदा केहि भने होलान नि पशुपतिनाथलाई । उनको भावना जो छ, त्यसलाई म कदर गर्छु । एकजनाले साईबाबको विभूति मेरी जहानलाई दिएको रहेछ यो लगाइदिनुस् भनेर । मलाई विभूति दिने व्यक्तिाको वा त्यस विभूतिलाई पवित्र ठान्ने मेरी पत्नीको भावनालाई म असाध्य कदर गर्दछु । यो पनि मलाई थाहा छ, मानिसको आत्मबलमा छ । सानो एउटा संकट छ, कतिलाई छटपटाएर मारिदिन्छ । कोहि मान्छे त्यो संकटमाथि विजय प्राप्त गर्दछ । त्यो पनि मलाई थाहा छ दैवी शक्ति भन्ने कुरा त्यसबाट निःसृत हुन्छ ।
यसपाली म बम्वईको एउटा क्यान्सर हस्पिटलमा थिएँ । क्यान्सर हस्पिटलको वातावरण बडो निन्याउरो किसिमको छ, किनभने क्यान्सर भयो भन्नेबित्तिकै त त्यस व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिएजस्तो नै भयो । एउटा मान्छेलाई मृत्युदण्ड हुन्छ, त्यसको अपिल इत्यादी गर्दागर्दा ५ ६ वर्षमा त्यो कार्यान्वित हुन्छ । त्यस्तै हो क्यान्सर भनेको पनि । जसलाई क्यान्सर भयो भनेको छ, त्यो आधारमा त्यसै मरिसकेको जस्तो हुन्छ ।
त, म टहलिइरहेको थिएँ बम्बईको क्यान्सर हस्पिटलको छतमा सानो छत छ । अरुभन्दा पहिले गएर म टहलुँ भनेर गएको थिएँ । अरु कोहि बिरामी जाँदैनन् त्याहाँ । त्यहाँ मैले देखेँ एउटी स्वास्नीमान्छे सूर्योदयको प्रतिक्षा उभिहरेकी थिई । उसले देखि मलाई । म पनि एउटा कुनामा टहलिरहेको थिएँ । उसले आफ्ना चप्पल फुकाली र बडो आर्तरोदन र करुणाको वरमा प्रार्थना गरी त्यो सुर्यलाई । मलाई लाग्दछ, त्यसको छोरा वा दुलाहा म जस्तै रोगी होला । अनि मलाई लाग्यो, सवैको परिवारलाई त त्यहाँ चोट परिरहेको छ, जस्तो उसलाई पर्यो होला, त्यस्तै मेरो परिवारलाई र अरु परिवारलाई पनि पर्यो होला चोट ।
अब देउताले क कसलाई बचाई हिँड्ने ? अब एउटी स्वास्नीमानिस उसको तमाम आधार नै डुब्न थालेको छ, केही आधार नभएर उदाउन लागेको सुर्यलाई अध्र्य दिएर प्रार्थना गर्न लागेकी छ, रोएर बलिन्द्र आँसु झारेकी छ । मन्दिरमा भएको भए त अर्कै कुरा हुन्थ्यो होला । तर अस्पतालको यस छतमा त्यस हस्पिटलकै कुनै रोगीका निम्ति त्यसले पुकारा गरी होली । अधबैंसे थिई, त्यसै हुनाले आफ्ना दुलाहाका लागि होला वा छोरा वा छोरीका लागि होला, ऊ प्रार्थना गरिहेकी थिई । अब देवताले त्यसलाई सुन्ने ? कतिलाई सुन्ने ?
मेरो समस्या के छ भने मैले कसैलाई बुझ्न खोजेँ भने त्यही ठाउँमा बसिदिन्छु । मैले देवतालाई बुझ्न खोजेँ भने म के सोच्दछु भने म देवता भएको भए के गर्थे ? मैले या त क्यान्स रोग हुँदै नहुने पार्नुपर्यो । क्यान्स भएपछि त कति मान्छे मर्छन्, कति मान्छे मर्दैनन् । देवताले कसलाई बचाउने ? कसलाई नबचाउने ? त्यसको मापदण्ड के ?
अस्ती एउटा जोगी आए म कहाँ । ती पाखण्डी जोगी होइनने, भित्रैदेखि लागेर जोगी भएका । पहिले हाम्रै पार्टीमा थिए, पछि के के विरक्त लागेर उनी जोगी भए । उनी आएर भने, मेरा गुरुले थाहा पाए तपाई बिरामी हुनुहुन्छ ।
उनका गुरु ह्षिकेश भन्दा माथि बस्ता रहेछन् । गुरुले भने त्यसो हुनाले केही न केही त गर्नुपर्यो । म पनि गर्छु तिमी पनि गर भनेर मलाई पठाएको हुनाले म आएको हुँ भने । उनले भने, तपाईका निम्ति जे गर्नुपर्छ, कुनै अनुष्ठान वा यज्ञ, त्यो म कुनै पवित्र स्थलमा गएर गर्छु । अनि मैले नै प्रश्न गरेँ, यतिका मान्छे मरिरहेका छनन्, देवताका अगाडि कति लडाइँ र नरसंहारहरु भएका छन् । त्यस लडाइँमा कति बालकहरु मारिए होलान् । मेरा बारेमा मात्र देवता किन फिकिर हुने ?
उनले भने, मेरो गुरुले भनेका छन्, कि साधारण लाखौ मानिस महत्वका हुँदैनन्, तर असाधारण एउटा व्यक्ति पनि बडो महत्वको हुन्छ देवताको नजरमा । त्यसलाई बचाउने वा रक्षा गर्ने देवतालाई पनि पर्छ । त्यस ठाँउमा राम्रो उद्योग भएको छ र देवतालई पनि खाँचो परेको छ भने देवताले बचाँउछन् । उनले त्यो एउटा तर्क दिए ।
भनाईको मतलब के हो भने अहिले हामीहरु त हिन्दुशास्त्रको मुताबिक र आजकालको विज्ञानको मुताबिक पनि विकासमान स्थितिमा छौं । हामीहरु मानव सवैभन्दा ठूला र सवैभन्दा परिष्कृत जीव हौं अरुका तुलनामा यो कसरी भयो ? भन्दा विकासवादीहरु भन्दछन्, तलबाट विकास हुँदाहुँदै यस रुपमा आयो । आत्यात्मवादीहरु पनि त्यस्तै कुरा भन्दछन् र हामीहरुमा अझ पनि अगाडि बढ्ने क्षमता छ भन्दछन् । हामीहरुले त्यस क्षमतालाई बुझेर काम गर्यौं भने मानवबाट अतिमानवमा पुग्न सक्दछौं, र हुन सक्छ भोलीको मानव समाज अतिमानव समाज भएर जाओस् । त्यस दृष्टिबाट एउटा अतिमानव दसवटा साधारण मानिसभन्दा, एउटा साधारण मानिस लाखवटा फट्याङग्राभन्दा महत्वपूर्ण हो भन्ने कुरा मान्ने हो भने त अलिकति बृद्धिले भ्याउँछ ।
अर्को कुरा के छ भने मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु हामीहरुको तर्क मानवतर्क हो र हामीहरुको दृष्टि पनि मानवदृष्टि हो । जस्तो भ्यागुतोले हेरेको छ भने उसको देखाइमा पर्ने उसको रेटिन्यूमा पर्ने अर्कै रुप हुन्छ । मानव चक्षुले त्यही कुरा हेर्दा अर्को रुप देखिन्छ । त्यस्तै, देवताको आँखामा पर्ने रुप विश्वको अर्कै हुन्छ, उसको तर्क पनि अर्कै छ । त्यसो हुनाले त्यो त बुद्धिले तर्क गर्न सक्ने कुरा उसको दृष्टिले हेर्न सक्तैनौं । देवताको कानले सुनेको कुरालाई बुझ्न सक्तैनौं । त्यसो हुनाले भन्छन् ती हाम्रा आध्यात्मवादीहरु, त्यो त असभ्य छ, केही लाग्दैन । जब तर्कले भेट्टाउँदैन, तिनले पनि अन्त्यमा भनिदिएका छन्, मायाबाट प्रभावित भएर जानुपर्दछ । यथार्थमा, बाटो हिँड्दाहिँड्दै एउटा खाल्डो पर्दछ, त्यस खाल्डोलाई श्रद्धा र भक्तिकै आधारमा पार गर्नुपर्दछ ।
मेरो व्यक्ति मानोस् नमानोस्, तर यत्रो विश्वास जब मेरो मानिसहरुले गर्दछन्, कसैले प्रसाद ल्याइदिएको छ, कसैले के के ल्याइदिएको छ, के के गरेको छ, अनुष्ठान र यज्ञ गरेको छ मेरा लागि, त्यसले त मलाई अभिभूत नै गर्दछ ।
हिन्दुस्थानमा अहिले मेरा मित्रहरु धेरैले धेरै कुरा मेरा लागि गरिरहेका छन् । कसैले जप गराएका छन्, कसैले बाबालाई भेटेका छन् । एउटा मेरा बंगाली मित्र छन् कलकत्तामा, उनले बारम्बार सुशीलालाई खबर गरेका छन् । तिमी आऊ एकपटक भनेर । पहिले त मलाई पनि लिएर आउनु भनेका थिए, तर म नआए पनि सुशीलालाई आऊ भनेर खबर पठाइरहेका छन् । एउटा त्यता कतै गजबकी देवी छन्, तिनका पुजारीले यिनलाई केही पूजा गर्र्न बताएको रहेछ । अब मैले सुशीलालाई जाऊ भन्ने कि नभन्ने ? मेरो मात्रै कुरा भएको भए किन जानुपर्यो ? भन्थे । तर मेरो मात्र विश्वास, मेरी पत्नीको विश्वास, मेरा परिवारको र परिवारका व्यक्तिको विश्वासको कुरा छ । त्यसो हुनाले यत्रो ठूलो विश्वासका साग मलाई जुन मानिसहरुले आ आफ्नो तरिकाबाट ईश्वरको अनुकम्पा दिलाउन चाहन्छन्, म त छक्क पर्दछु कहिलेकाँही । कहिलेकाँही मलाई आएका चिठ्ठीहरुको खाम जब म उघार्छु, त्यसमा दुई चारवटा फूलका पातहरु पाउदछु, त्यसमा सिन्दुर,चन्दन इत्यादी भएको । हिजो एक जनाले खाम खोल्दाखेरि एकजनाले मनकामनादेवीको पूजा गरेर खाममा केही फूलका पात र सिन्दुर पठाएको थियो । अब त्यत्रो ठूलो श्रद्धालाई म अस्वीकार गर्छु त भन्न सक्तिनँ ।
धर्म भनेको मेरो दृष्टिमा के छ भने दुई लोकमा मानिसहरु विचरण गर्दछन् । एउटा भौतिक लोक । त्यो धर्तिबाट उत्पन्न हुन्छ, गुलाफ, चमेली । त्यसमा कुनै पौष्टिक तत्व हुँदैन । मानवलाई एउटा भौतिक पदार्थ, भोजन इत्यादी चाहिन्छ । सुर्य उदयले, गुलाफ फक्रेको कुराले पनि तपाईलाई रिझाउन सकने भने तपाईको जीवनको एउटा पक्ष त सुकेको पनि तपाईलाई रिझाउन सकेन भने तपाईको जीवनको एउटा पक्ष त सुकेको रहेछ, मरेतुल्य भएको रहेछ, तपार्य सुर्योदयलाई राम्रो भन्न सक्नुभएन र रोमाञ्चित हुनुभएन भने । हो, त्यो रोमाञ्चकता जसले उत्पन्न गर्दछ, त्यही ठाउँमा धम पनि बसेको हुन्छ । मेरो एक पटक बहस चलेको थियो जयप्रकाश नारायणसंग । त्यहाँ अरु पनि थिए । केही बैज्ञानिकहरु आएका थिए । तब यही सब तर्कहरु दिइरहेको थियो । धर्म र ईश्वरका कुरामा, धर्मका कस्तो आवश्यकता छ । साँच्चि भनौँ भने ठूला ठूला धार्मिक मानिसहरु त त्यस कर्मकाण्डपट्टि जाादै जाँदैनन् ।
हिन्दुधर्मशास्त्रकै कुरा गरौ भने पनि कर्मकाण्डलाई नमानीकन भने मुसलमानले अर्को, क्रिस्चियनले फेरि अर्कोलाई धर्म मानेका छन् । तर सवै तल त्यही भावजगतबाट उम्रेका तत्वहरु हुन् जो आध्यात्मिक भनौँ वा आधिभौतिक भनौँ, भौतिक भन्दा बाहिरका कुराहरु हुन् । हामी कविता पढ्दछौ । अलि रमाइलो गरी भनौँ भने तपाईहरु आफ्नो प्रेयसीलाई गुलाफसँग तुलना गर्नुहुन्छ होला चन्द्रमासँग । यो तुलना के हो ? तपाईले कसैलाई माया गर्नुभयो भने त्यसको अनुहार चन्द्रमा जस्तो छ भन्नुहुन्छ । तपाईंलाई धोका हुन्छ चन्द्रमा हो कि भनेर । यो धोका पर्नु साँचो कुरा हो ? एउटी केटीलाई गुलाफ जस्ती सुन्दरी हेर्नु भयो भने झूटो कुरा हो त्यो ? मैले जयप्रकाशसँग के भनेँ भने चन्द्रमा जस्ती उज्याली छ ? गुलाफ जस्ती छ भन्ने भ्रम भएन भने तपाईले त्यसलाई माया नै गर्नुभएन । होेइन, त्यो लडकी हो, सामान्य स्वास्नीमानिस हो, रगत मासु र हाडकोबाट बनेको शरीर हो मात्र तपाई भन्नुभयो भने तपाई त यथेष्ट किसिमबाट माया नै गर्नुभएन, तपाईलाई अनुभव नै भएन मायाको ।
जस्तो कालिदासले भनेका छन्, कैलाशको बर्णन गर्दाखेरि, कस्तो लाग्दछ र त्यो धर्म त्र्यम्बक, त्र्यम्बक भनेको शिब न बस्तछन् कैलाशमा त्र्यम्बकले हाँस्दाखेरि त्यो उज्यालो हुन्छ, त्यसैको राशिकृति जमेर बनेको कैलाश हो । त्र्यम्बकस्य अट्टहास भनेको छन्, अर्थात त्र्म्बकले खुला दिलले अट्टहास गर्दाखेरि जो निस्क्यो होला, त्यो चमक सधैँ थपिँदा थपिँदा यो कैलाश बनेको हो । अब यो झुटो होइन ? तर झुटोलाई तपाईले अनुभव गरेर खुशी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? या भनौँ के फजुलको कुरा भनेको, यो त यथार्थ कुरो हो, झुटो कुरो हो भन्नुभयो भने तपाईको व्यक्तित्वको एउटा अशक्त सुकेको रहेछ, त्यसमा रसै रहेनछ भन्नुपर्छ । धर्म भनेको त्यस क्षेत्रको कुरा हो । यसमा कविले भन्दछन कि शंकर बस्ने कैलाश भनेको उनको हाँसो जमेको हो ।
त्यसो हुनाले धर्मका विरुद्ध म छँदै छैन, पटक्कै छैन तर सवैलाई थाहा छ, म धर्मको अभ्यास गर्दिनँ । म कहिलेकाहीँ पशुपतिनाथ मन्दिरमा जान्छु । बनारसमा विश्वानाथको मन्दिरमा पनि जान्छु । त्यहाँ मैले के देखेको छु भने हजारौ लाखौ मानिस ती देवताका अगाडि, त्यो पत्थरको सुन्छ कि सुन्दैन, त्यो पनि मलाई थाह छ आर्तनाद गरेका छन् त्यसका अगाडि । त्यो मैले सुनेको छु । त्यसका अगाडि लाज नमानि रोएका छन् । जो अरुका अगाडि आँखाको आँसु देखाउन चाहँदैनन्, त्यहाँ खुलेआम र सवैका अगाडि देवता सम्मुखमा बसेर बच्चालाई लिएर रुन्छन् । बच्चालाई नकरा भनेर थप्पड पनि लगाइरहेका छन्, त्यो पनि भइरहेको छ । त, मलाई त्याँ विश्वको एउटा रुप देखिन्छ । समाजको मात्रै होइन कि अति करुणामय हाम्रो जीवन छ, कति सम्वेदना खोजिरहेको छ हाम्रो जीवनमा । हामीहरुले त त्यो गर्दैनौ, तर त्यहाँ गएर त्यो थाहा पाइन्छ । त्यही स्वास्नीमान्छे, जसले क्यान्सर अस्पतालमा त्यसरी रोई, त्यसको मलाई छाप परेको छ , मैले केही गर्न सक्नेभए त्यसको लागि म केही गर्ने थिए भन्ने लागेको छ ।
म नास्तिक हुँ कि होइन भन्दा मलाई बताउनुपर्छ, यो कुरा मान्छौ कि मान्दैनौँ । शिवपुराणमा बर्णन भएको शिवको सम्बन्धमा त्यो सच्चा ऐतिहाँसिक घटना हो भनेर मसंग सोधे भने म भन्छु, म मान्दिन, म यसमा नास्तिक । यो गरुणपुराणमा मान्छे मरेपछि के के हुन्छ भनेको कुरा म मान्दिन म नास्तिक भएँ । तर त्यसलाई कुनै प्रतिकात्मक रुपबाट भन्ने हो भने त्यसमा भएका धेरै कुराहरु म मान्दछु । त्यसो हुनाले मलाई बताइदिनुपर्छ कि कुनै खास कुराको सम्बन्धमा मेरो आस्था छ कि छैन भनेर ।
धेरै कुराहरुको बारेमा म जान्दिन । त्यसो हुनाले म भनिदिन्छ’ अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ जो नास्तिक पनि होइन, आस्तीक पनि होइन त्यसलाई एडनोस्टिक भन्दछन् । त्यसले प्रश्नचिन्ह राख्छ आफ्नो मनमा । यो होइन, झूटो पनि भन्दैन यो हो, साँचो पनि भन्दैन, मेरो मस्तिष्क खुला छ भन्दछ ।
म माथि धर्मको ठूलो असर परेको छ । तर कसैलो सोधोस्, विहान नुहाउछस् कि नुहाउदैनस् ? अनै लगाउछस कि लगाउदैनस ? टुप्पी छ कि छैन ? आस्तिक हो कि नास्तीक हो ? मलाई यो निरर्थक लाग्छ । मैले भनिहाले म देवता कहाँ प्राथना कहिल्यै पनि गर्दिन । किनभने मैले देखेको छु मेरो भन्दा बढि आवश्यकता परेका मानिसहरुको प्राथना देवताले सुन्न सकेका छैनन भने म त्यत्रै दम्भी कि मेरो कुरा पुग्छ भनेर प्राथना गरौँ ? त्यो दम्भ मलाई छैन् । त्यसो हुनाले मैले कहिल्यै देवताको प्राथना गरिनँ ।
राष्टपुकार साप्ताहिक, पुस २०३८ प्रकाशित
पर्वतारोही आङरिता शेर्पाको निधन भएको छ । हिम चितुवाको उपनाम पाएका शेर्पाको सोमबार विहान १०
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा एकदर्जन महिला पदाधिकारी दाबि गर्दै
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन आउदो फागुनमा हुने भनिएको छ । तर अब महाधिवेशन फागुनमा